टन स्मार्टफोन: शुल्क, मुल्य र समीक्षा
कारण प्रयोगकर्ता बीच स्मार्टफोन को लोकप्रियता को लागि, धेरै संचालक विशेष विकसित गर्दै छन् , महसुल तराजू यस्ता उपकरणहरू को मालिक बीच मांग मा हुनेछ। विशेष मा, फोन स्मार्ट लागि डिजाइन सेवा प्याकेजहरू कलको लागि इमेल र सामाजिक सञ्जाल, एसएमएस पैक र मिनेट को लागि मोबाइल इन्टरनेट समावेश गर्नुहोस्।
कुनै अपवाद र रूसी अपरेटर टन छ। कम्पनी आफ्नो सदस्यहरू अन्तर्गत स्मार्टफोन र ट्याब्लेटको लागि दुवै धेरै शुल्क सिर्जना गरेको छ। तिनीहरू यस लेखमा आवरण समावेश भन्ने तथ्यलाई।
टन स्मार्ट प्याकेजहरू - स्मार्टफोन खुसी हुनेछ!
कम्पनी स्मार्ट भनिन्छ मोबाइल फोन प्रयोगकर्ता पूरा हुनेछ भनेर शुल्क को एक पुरा सिस्टम शुरू। यो सेवा कि मूल्य र प्रदान डाटा को मात्रा मा फरक चार थप प्याकेजहरू समावेश छ। यसलाई अब स्मार्ट मिनी, स्मार्ट, स्मार्ट + र स्मार्ट शीर्ष को एउटा प्रश्न छ।
यस सम्बन्धित रकम लागि कम प्राप्त वा थप सुविधाहरू लागि विनिमय थप भुक्तानी गर्न - सही चयन गर्न सदस्य। को प्याकेटहरू भिन्नता इन्टरनेट जडान को मेगाबाइट को मात्रा मा छ (टन स्मार्टफोन प्रयोगकर्ता शायद साइटहरूमा "सर्फिङ" हुन, समाचार पढ्न र विभिन्न मिडिया सामग्री मनोरंजन हुनेछ जो संग एक उपकरण मानिन्छ), एसएमएस-सन्देशहरू, नेटवर्क भित्र निःशुल्क मिनेट को राशि र, पाठ्यक्रम, प्याकेज को क्षेत्र। उदाहरणका लागि, जो मा सदस्य रूस अन्य भागहरु को प्रयोगकर्ता संग कुरा गर्न मौका दिइएको छ दर, थप खर्च हुनेछ।
थप स्पष्ट महसुल को जो बुझ्न "टन स्मार्टफोन" तपाईं सबै भन्दा राम्रो, हामी तिनीहरूलाई प्रत्येक मा आधारभूत जानकारी दिन अनुरूप हुनेछ।
"मिनी" प्याकेज - का सबैभन्दा सरल र किफायती सुरु गरौँ। यो न्यूनतम माग र सकेसम्म सानो रूपमा जडान मा खर्च गर्न चाहनुहुन्छ गर्नेहरूलाई साथ प्रयोगकर्ताका लागि डिजाइन गरिएको छ। सदस्यता शुल्क, प्रयोगकर्ता चार्ज छ जो, केवल 200 rubles छ। पैसा को लागि एक व्यक्ति इन्टरनेट को 500 एमबी, एउटै क्षेत्रबाट टन सदस्यहरू कल अनगिन्ती, 50 एसएमएस र क्षेत्रमा अन्य संचालक को संख्या कल लागि 1000 मिनेट प्राप्त गर्दछ।
यस मामला मा, अन्य संचालक कल गर्न, तपाईं प्रति मिनेट 1.5 rubles तिर्नुपर्छ। रूपमा कम्पनी को आधिकारिक वेबसाइटमा रिपोर्ट, को महसुल "टन स्मार्टफोन मिनी» (वा आधिकारिक भनिन्छ रूपमा, स्मार्ट मिनी), तपाईं एक स्टार्टर पैक लायक 220 rubles खरीद गर्नुपर्छ।
महसुल अर्को कदम स्मार्ट डाटा प्याकेट छ। यो एक अधिक महंगा दर, प्रयोग प्रत्येक महिनाको लागि 450 rubles खर्च हुनेछ जो छ। साँचो, सदस्य क्षमता अधिक हुनेछ। तसर्थ, यस सन्दर्भमा स्मार्टफोन लागि टन इन्टरनेट प्रयोगको लागि डाटा को3जीबी को राशि प्रदान गरिएको छ। यसलाई हामी देख्न रूपमा, छ6पटक अघिल्लो महसुल लागि प्रदान दर भन्दा उच्च छ।
साथै, सदस्य संख्या टन स्वामित्वको, साथै थप 500 मिनेट संग असीमित कुरा, जो अन्य संचालक को संख्या कल लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ संग प्रदान गरिएको छ। पाठ संचार लागि अपरेटर 500 एसएमएस कि प्रयोगकर्ता मुक्त लागि कुनै पनि नम्बर पठाउन सक्छन् प्रदान गर्दछ।
को महसुल योजना मासिक शुल्क को लागत - 450 rubles।
अर्को महसुल, "स्मार्टफोन टन" प्याकेजको अध्ययन मा हाम्रो लागि रोचक छ - "स्मार्ट प्लस"। 900 rubles एक महिना - यो पनि अधिक महंगा लागत। यो रकम लागि ग्राहक टन नेटवर्क मा कुनै पनि नम्बरमा धेरै5रूपमा जीबी मोबाइल इन्टरनेट डाटा र असीमित कल प्राप्त गर्दछ। साथै, सदस्य देश वरिपरि कुनै पनि नम्बरमा कल को 1100 मिनेट, र 1100 एसएमएस सन्देश प्रदान गर्दछ।
आवंटित प्याकेट बिताएपछि प्रदान गरिने सेवाहरूको लागत सदस्य सेवा "थप अनलाइन" र "एसएमएस अतिरिक्त" जडान कि निर्भर गर्दछ। यो हो भने, इन्टरनेट निःशुल्क छ, तर गति सीमा संग। जबकि एसएमएस 50 सेन्ट / टुक्रा अधिक खर्च हुनेछ।
अन्तमा, सबैभन्दा महंगा र सबैभन्दा प्रशस्त अवसर संग नै दरमा - यो "स्मार्ट शीर्ष" छ। यसको मूल्य प्रति महिना 1,500 rubles पुग्छ, र मुद्रा को लागि प्रयोगकर्ता रूस र असीमित कल मार्फत इन्टरनेट को 10 जीबी हुन्छ को टन नेटवर्क भित्र। यस मामला मा, सट्टा 1100 "स्मार्ट प्लस" प्रयोगकर्ता "Topa" विदेशी संचालक को संख्या कल लागि 2,000 मिनेट, र देश भर 2000 एसएमएस सन्देश हुन्छ। एक व्यक्ति चिह्नित सीमा खपत भने, टन गर्न विदेशी संचालक संग कनेक्शन प्रति मिनेट3rubles तिर्न हुनेछ लागि जबकि यो नि: शुल्क विनियोजन गरिनेछ भनिएको छ।
यो टन सदस्यताका लागि डिजाइन स्मार्टफोन अन्य दर प्रयोग गर्न सम्भव छ। यो र "दोस्रो द्वारा दोस्रो" योजना "सुपर टन।" पहिलो एक सदस्यता शुल्क को कमी हरेक महिना छ, तर यो मास्को क्षेत्र भित्र स्थित फोनमा कुराकानी हरेक दोस्रो,5सेन्ट हटाउन पनि समावेश छ। अर्को क्षेत्रबाट कसैसित बोल्न, तपाईं यसलाई टन को संख्या, र 14 rubles / अन्य संचालक को संख्या कल लागि मिनेट आउँदा, प्रति मिनेट5rubles को दरमा भुक्तानी गर्न छ।
महसुल "सुपर टन" कुनै मासिक शुल्क लागि प्रदान गर्दछ, तर तिनीहरूलाई तपाईंलाई टन को सदस्यहरू,5rubles (दिन उपयोग प्रति कुराकानीमा को 21 मिनेट सुरु हुने) संग प्रति बन्धन डेढ rubles तिर्न - अन्य संचालक कल लागि।
त्यसैले, सबै भन्दा अधिक संभावना, तपाईं इन्टरनेट, अधिक लाभदायक प्रयोग गर्न आवश्यक छ भने तपाईं स्मार्ट शुल्क हुन लागि।
टन देखि फोन
साथै, कम्पनी मोबाइल सेवाहरूको प्रावधान मा लगे छ, अपरेटर पनि स्मार्टफोन को आफ्नो लाइन छ। आफ्नो दायरा आधिकारिक वेबसाइटमा एक विशेष अनलाइन स्टोर मा प्रस्तुत गरिएको छ। सबै टन स्मार्टफोन, प्रत्येक लागि आफ्नो मूल्यहरू र मूल्यांकन त्यहाँ पाउन सकिन्छ। यो स्रोत पनि स्मार्टफोन नै आदेश गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
तपाईं सोध्न सक्छ मोबाइल अपरेटर को ब्रान्ड नाम अन्तर्गत बेचिन्छ जो उपकरणको के सुविधाहरू,? लामो दुनिया भर अभ्यास गरिएको छ जो मोडेल, अनुसार, यी फोन एकल अपरेटर द्वारा लक छन्। यो "टन" खरिद स्मार्टफोन मात्र अपरेटर को सिम कार्ड संग काम गर्नेछ भन्ने हो।
फाइदाको के हो?
प्रश्न उठ्छ, यो अन्य नेटवर्क संग प्रयोग गर्न सकिँदैन भने गर्न, फोन (स्मार्टफोन टन) किन किन्न? यसलाई वरिपरि प्राप्त गर्न सक्छन् जो प्रयोगकर्ता लागि एकदम महत्वपूर्ण सीमा छ? कस्तो ग्राहक अर्को अपरेटर स्विच गर्न चाहनुहुन्छ भने हुन्छ?
स्मार्टफोन प्रतिज्ञा कि लाभ, टन (यी समीक्षा को मूल्य, हामी तल वर्णन), एक कम लागत उपकरण हो। त्यो बारी मा, मोबाइल अपरेटर सदस्य बाट भविष्यमा नगद प्रवाह आधारमा मूल्य, lowers भन्ने तथ्यलाई द्वारा बताए छ। आखिर, तपाईं देख्न, मान्छे एक स्मार्टफोन मोबाइल सेवा अपरेटर लागि तिर्ने जारी प्रयोग गर्नेछ। तसर्थ, टन यस्तो उपकरणहरू सस्ता छन् बेच्न सक्छ।
तपाईं यसलाई समीक्षा पहिलो कुरा पढ्न आवश्यक छ रूपमा स्मार्टफोन, को टन मा किन्न चाहनुहुन्छ भने। स्मार्ट मोडेल सुरु - उदाहरणका लागि, सबै भन्दा लोकप्रिय (र किफायती) को एक ले। जबकि, रूपमा ग्राहक समीक्षा द्वारा उल्लेख, यन्त्र पूर्णतया यसको मूल्य मिलाउँछ छ यसलाई, बस 2990 rubles लागत। विशेषताहरु यो बजेट टचस्क्रीन फोन, राम्रो तरिकाले एक "डायल" को रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ जो संकेत र, संगीत सुन्ने "स्काइप" मा कुरा, एक पुस्तक पढेर वा को लागि एक ग्याजेट रूपमा इन्टरनेट चलाउदै।
अर्को उदाहरण: एक बजेट मिसिन, तर एक ठोस स्मार्टफोन, थप सक्षम छ तपाईं को आवश्यकता घटनाको, तपाईं मोडेल 968. यो स्मार्टफोन टन (समीक्षा पुष्टि) अधिक प्रभावशाली र लायक 6500 rubles देखिन्छ चयन गर्न सक्नुहुन्छ। एकै समयमा यसलाई 1 गीगा को क्षमता,5मेगापिक्सेलको एक क्यामेरा संग एक प्रोसेसर संग सुसज्जित छ, आकार मा राम 512 एमबी र जीपीएस-मोड्युल र मेमोरी कार्ड स्लट को जस्तै विभिन्न अवसर। पैसा को लागि, फेरि, खरीददारों को सिफारिसहरू अनुसार, उत्कृष्ट उपकरण पाइन्छ।
कम्पनी अन्य स्मार्टफोन टन बेच्छ। मूल्यहरु, समीक्षा र विनिर्देशों - केहि तपाईं ध्यान पहिलो स्थानमा आवश्यक छ। यसलाई आफ्नो बाह्य डिजाइन र अन्य प्राथमिकताहरू आधारित एकाइ टिप्न सम्भव पनि छ।
सुविधाहरू ब्रांडेड उपकरणहरू
सामान्य मा, एक स्मार्टफोन खरीद, यसको मुख्य विशेषताहरु सम्झना - बरु, यो दैनिक कामको लागि गम्भीर मिसिन भन्दा, टन सिम कार्ड को लागि एक सरल बजेट फोन छ। यसको कोर मा, फोन - सस्तो चिनियाँ एन्ड्रोइड-उपकरणहरू। त्यसैले, सैमसंग, एप्पल वा लेनोभो देखि स्मार्टफोन तिनीहरूलाई तुलना गर्न कुनै अर्थमा बनाउँछ। बस स्मार्टफोनका स्थापित छन् के विचार, टन मूल्यहरु, तिनीहरूलाई को समीक्षा सकारात्मक छन्। सम्झना तथापि, तिनीहरूले आधारभूत समस्या (माथि छलफल) को लागि मुख्यतया उपयुक्त छन्। तिनीहरूलाई प्ले वा रंगीन तस्वीर बनाउन, हाय, काम गर्ने छैन।
सामान्य मा, टन को वेबसाइट मा वर्गीकरण रूपमा, मान्छे खरीद रहे यी फोन र त्यहाँ तिनीहरूलाई लागि माग। र फेरि, उपकरणले टन गर्न accustomed निम्ति स्पष्ट लाभ हुनेछ डाटा योजना जोडिएको।
"इन्टरनेट विदेश" (टन): जडान कसरी?
टन: बेलारुस मा रोमिङ। शुल्क, जडान
महसुल "स्मार्ट", टन - समीक्षा। महसुल "स्मार्ट" टन - जडान
बोनस "बीलाईन", "धन्य समय" कसरी खर्च गर्ने? सेवाहरू "बीलाईन"
पैसा र उपहार अनुवाद मेगाफन मा अंक रूपमा? कार्यक्रम को सबै अवस्था
विशेषताहरु र आवेदन: को लागि छत ग्याँस बर्नर
हलवे लागि वालपेपर कसरी चयन गर्न
तर केक कसरी ह्विप गर्न? व्यावहारिक सल्लाह
रात अवलोकनका लागि सबै भन्दा राम्रो सोभियत चलचित्रहरू
यसरी, पिन कोड। ठूलो र ... neuzhasny
च्याउ krasnogolovik: वन विनम्रता
शब्द "प्रवासी" को अर्थ। प्रवासी गर्ने छ। प्रवासी - यो ...
अज्ञात क्रिमीआ - Kacha, बाँकी बारेमा समीक्षा
एमएलएम - यो के हो? सफल व्यापार वा घोटाला?
कसरी कागज बाहिर एक खरायो बनाउन: कार्यशालाओं